Global Voices teny Malagasy » Etazonia: Asiana Indray Ny Kolontsain’ny Mpifindra Monina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2012 0:06 GMT 1	 · Mpanoratra Yarisa Colon Nandika (en) i Elizabeth Rivera, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Niteraka fahatafintohinana ny fanapahan-kevitra hanaisotra ny tetikasa fampianarana Meksikana-Amerikana, izay efa napetraka tao amin'ny sekolim-panjakana ao an-tanànan'i Tucson, ao Arizona, tamin'ny taona 1998. Ho an'ny maro an'isa, ny fanesorana ny tetikasa sy ny fandraofana an-keriny ireo boky toy izao dia mampiseho mazava ny fomba konservativa tafahoatra, izay manohintohina ny harena ara-kolotsaina sy ara-tantara ao amin'ity faritra ity.
Miankina amin'ny sata ARS-15-112 , lalàna HB 2281 ny fanapahan-kevitra nankatoavin'ny lehiben'ny fandraharahana ao amin'ny sekolim-panjakana, misahana ny distrika ao Tucson, John Huppethal, tamin'ny volana janoary lasa teo. Araka ny fanazavan'i Jasmine tao amin'ny LatinitasMagazine , dia mandrara ny fisian'ny lakilasy na taranja ahitana zavatra toy izao ny lalàna:
Mampiroborobo ny fitsipahana ny governemanta ao Etazonia.
Mampiroborobo ny lolom-po eo amin'ny foko sy ny sarangan'olona.
Natokana voalohany indrindra ho ana vondron'olona manokana.
Manome vahana ny firaisankinan'ny mpiray foko fa tsy mandray ny mpianatra ho toy ny olon-drehetra.
Indreto ny lisitr'ireo boky noraofina an-keriny:
“Rethinking Columbus: The next 500 years” (Fisainana indray momba an'i Columbus: ny 500 taona hoavy) nosoratan'i Leslie Silko
“The Tempest” (Ny Tafio-drivotra) nosoratan'i William Shakespeare
“Pedagogy of the Oppressed” (Fomba Fampianarana Ny Voageja) nosoratan'i Paolo Freire
“Occupied America: A History of the Chicanos” (Amerika Voabodo: Tantaran'ny Chicano) nosoratan'i Rodolfo Acuña
“Chicano: The History of the Mexican-American movement for Civil Rights” (Chicano: Tantaranà hetsika Meksikana-Amerikana mandala ny Zo Fototra) nosoratan'i Arturo Rosales
“500 years of Chicano History in Images” (500 taona an-tsary ny tantaran'ny Chicano) nosoratan'i Isabel Martínez
Tsindrio eto  raha hamaky ny lisitra feno.
Ity manaraka ity dia lahatsary ahitana ny hetsi-panoherana ataon’ ireo mpianatra sy mpampianatra noho ny fandrarana ny fampianarana momba ny foko ao Tucson.
Araka ny efa nampoizina, tsy tao Tucson ihany no niseho izany firaisankina kasain'ny fanjakana asiana fanarahamaso izany fa niparitaka tao amin'ny faritra maro manerana an'i Etazonia ihany koa. Junot Díaz, Laura Esquivel, Ana Castillo, sy mpanoratra maro hafa ary fikambanana isan-karazany miaro ny fampianarana, ny literatiora sy ny fahalalahana haneho hevitra no nitsipaka ampahibe-maso ity fanapahan-kevitra tsy manaja ny lalampanorenana ity.
Nisy ny Fitakiana an-tserasera  natsangana toy ny bilaogy ho fanohanana ny fametrahana indray ny tetikasa fampianarana Meksikana-Amerikana. Banning History , ohatra, manaiky izay lahatsary ahitana olona mamaky teny, mihira na mampiseho ny sombin'ireo boky noraofina an-keriny.
"Tsy afaka manivana boky ianao", asa-tanana hita eny an-dalana ao Tucson, AZ. Sary avy amin'ny mpisera Flickr crjp. Nahazoana alalana, CC BY-NC-2.0 Licence.
Vondrona mpampianatra mpitolona (VMM)  miara-miasa amin'ny Rethinking Schools  (Misaina indray ny Fianarana) nanantotosa hetsika fanentanana ihany koa antsoina hoe “Tsy misy tantara tsy ara-dalàna: fanentanana ho fiarovana ny tantarantsika”. Namorona fampianarana mivelatra sy mifototra amin'ny lesona tao amin'ny tetikasa noraràna ihany koa izy ireo, mifameno amin'ireo lesona mikasika ny tolona ho amin'ny fahalalahana haneho hevitra sy ny fahasamihafan'ny kolontsaina izany.
Tokony hihamafy ity firaisankina midadasika ity satria fanefitra iray mahery vaika hoentina hanoherana ny fanararaotam-pahefana, ny tahotra sy ny fanavakavaham-bolokoditra. Amin'ny volana martsa hoavy izao, ho tonga any Houston, Texas hatrany Tucson, Arizona ny karavana Librotraficante  mba hizarana ireo boky natao sivana .
Ity manaraka ity ny lahatsary momba ny tetikasa nokarakarain'ilay mpanoratra Tony Díaz:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/24/29135/
 Fitakiana an-tserasera: http://www.change.org/petitions/tucson-school-board-dont-lock-up-knowledge-return-books-to-students-now
 Vondrona mpampianatra mpitolona (VMM): http://www.teacheractivistgroups.org/tucson/